Gudoomiyaha iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wakiillada Puntland oo caawa la kulmay Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Qaar ka mid ah xubnaha golaha wakiillada Puntland oo uu horkacayo gudoomiyaha golaha Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed iyo ku xigeenkiisa labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa caawa kulan la qaatay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Xildhibaan Sulaymaan Faarax oo ka mid ah xubnaha kulanka ka qaybgalay ayaa sheegay in ay madaxweynaha iska xog waraysteen xaaladda guud dalka iyo gaar ahaan arrimaha Puntland.
Gudoomiyaha golaha wakiillada iyo Xildhibaanada kale ayaa beryahan ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedka Puntland ayaa soo hagaagayay wixii ka dambeeyay 26kii Janaayo, markaas oo ay inta badan madaxda dowlad-goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ay ka qaybgaleen munaasabadda caleemasaarka Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdulahi Deni, dabadeedna waxaa madaxdu isku arkeen kulamo isu soo dhowayn ah.
Madashaas ka hor khilaaf siyaasadeed oo xoog leh ayaa muddo ka dhex jiray dowlad-goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, kaas oo hakad geliyay wada-shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
In kastoo guddoonku uusan weli dib ugu soo noqon Garowe, waxaa hore qorshaha ugu jirtay inuu dib u furmo kalfadhiga 43aad ee golaha wakiillada Puntland, si looga shaqeeyo miisaaniyadda dowladda ee 2019
Xildhibaano katirsan Galmudug oo ka walaacsan dagaalka Xeraale